Aasiyada Asia -
Way fiicantahay in lagu daydo, laakiin inaad rabto inaad la mid noqoto kan kale waa inaad diido qofkaaga. Madoow / Afrikaan qaaliga ah, ha u daynin hanaanka aad noloshaada ku daydaan…. Akhri wax dheeraad ah
Eeg sida ay u qabsadeen mashiinka Afrikaanka ah. Waxay ku daydeen, laakiin dhadhanka hadhuudhkoodu waa ka duwan yahay hadhuudh la shiilay oo la geeyay Congolese. Si fudud sababtoo ah q ... Akhri wax dheeraad ah
Gawaarida korontadu malaha sidii hore “kuwo nadiif ah” sidaad moodeysid. Macaamiisha waa inay ogaadaan in gawaaridan cagaaran ay ku sumoobi karaan dhibaato… Akhri wax dheeraad ah